Beautiful Horn of Africa: LAMA FILAAN
Waan isku mushquulsanaa oo waxaan ku fooraray telefonkeyga gacanta. Gaari ayaan dhex fadhiyay oo waxaan akhrisanayey qisadii As-xaabu Sabti ee naloogu sheegay Qur'aanka Kariimka ah. Gabadheyda ayaan sugaye in aan ka soo qaado dugsiga sare ee Oak Park High school. Kulbeegga wuxuu tilmaamaye in cimilada ay kulushahay kuna taagneyd 85 dhigirii. Dariishadaha gaariga waa ay ii furnaayeen. Hal baabbuur ayaa horteyda yaalley, dhinaca bidixna wey dhoobnaayeen. Xagga midig cidina igama xigin oo waxaa ku beernaa caws iyo geedo dhaadheer. Gadaal waxaa iga taagnaana maba aanan ogeyn.
Waxaan ka war helay qof dumar ah oo weliba Caddaan ah oo i dul taagan. Waxay i weydiisay in aan amaahin karo qalin. Waan yara naxay illeyn si kedis ah ayey iigu timide. Wey ila yara kaftantay. "Waxaa yaab ah in aniga iyo ninkeyguba aynan qalin sidan", ayey ku calaacashay. "Teeda kale, shaqo ayaan ku jiraa oo sidan baan Ku shaqyn hayaa", ayey sii raacisay hadalkeedi. Intaan qalin cuseyb ahaa farta ka saaray ayaan ugu bishaareeyay in ay iska qaadato qalinka. Ayadoo faraxsan ayey agteyda ka dhaqaajisay oo ku noqotay fatuuraddeedi oo gadaasheyda tiil.
Posted by Adan Makina at 7:47 PM